မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်	Posted on September 5, 2009	by mettayate မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် သာမန်အချိန်တွင်ကား မကွဲပြားပေ။ ကွဲပြားသောအချိန်ကား ဘာသာခြားနှင့် အိမ်ထောင်ပြုသောအချိန်၊ ဘာသာခြားက လာဘ်လာဘနှင့် မြှူဆွယ်သောအချိန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမှာ ဘာသာခြားနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင် ပါသွားသော်လည်း တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမှာ မိမိဘာသာ၌ မယိုင်မလဲခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည်နိုင်ကြပေသည်။ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သည် ရတနာသုံးပါးကို မသိဘူး။ ဘာမှတန်ဘိုးမထားဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဘာသာခြားနောက်ပါသွားပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်တယ်။ ထို့ကြောင့် မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်မှာပင် တန့်ရပ်ပြီး ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်များ အိပ်မောကျမနေကြပါနှင့်။ တရားတွေနာ၊ စာပေမျိုးစုံကြည့်ရှု၍ ဘာသာအားလုံးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာပြီး တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြပါလို့ အလေးအနက်သတိပေးပါသည်။
” မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်” ဆိုတာ ဘာလဲ။ မိမိရဲ့ အဖေ၊ အမေ၊ အဖိုး၊ အဖွားတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ မိမိလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လိုက်တာ။
သစ္စာရဲ့အစွမ်း၊ ရတနာသုံးပါးရဲ့အစွမ်း နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ ထလထော်ရဲ့အခန်းထဲက ဆင်းတုတော်ရှစ်ဆူဟာ တကယ်ကိုကြွလာပါတယ်။ ကောင်းကင်က ကြွလာတော့ နေရောင်ကလည်းထိုး၊ ရွှေရောင်နဲ့ဝင်းပြောင်နေတော့ တိုင်းသူပြည်သားရောတဿဘုရင်ကြီးလည်း လက်အုပ်ချီပြီး ဖူးရင်နဲ့ မျက်ရည်တွေ တစ်ပေါက်ပေါက်ကျလာပါတယ်။ အသက်မရှိတဲံ အ၀ိဉာဏကဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်တွေတောင်မှ ဒီလောက်တန်ခိုးကြီးမားရင် သက်တော်ထင်ရှားဘုရားများဆိုရင် ဘယ်လောက်များတန်ခိုးကြီးမားလိုက်မလဲ။ နောက်ဆုံးတော့ တိဿဘုရင်ကြီးအပါအ၀င် တိုင်းသူပြည်သားများအားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ပြန်ဖြစ်လာကြပြီး ထလထော်ကိုလည်း ဘဒြာဒေ၀ီအမည်နဲ့မိဖုရားမြောက်လိုက်ပါတယ်။ မူးမတ်တွေကိုတော့ ထလထော်လက်ထဲကို ဘုရင်က အပ်လိုက်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ကြင်နာသနားတတ်ပါတယ်။ (ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက် သာသနာနှစ် ၂၅၅၀ကျော်သည်အထိ ဘာသာရေးအတွက် သွေးလုံးဝမစွန်းသော တစ်ခုတည်းသာ ဘာသာဖြစ်ပါသည်။) ထလထော်ကတော့ ဗြဟ္မဏဘာသာဝင် မူးမတ်တွေကို သင်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံကိုသာ သွားကြပါလို့ဆိုပြီး တိုင်းပြည်ကနေ နှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုသာဓကအနေကတော့ ဗုဒ္ဓလက်ထက်က ကျောင်းဒကာ အနာထပိဏ်ရဲ့သမီး ဘာသာခြားယောကျာ်းနဲ့အိမ်ထောင်ကျသော်လည်း သူမ၏ခင်ပွန်း ယောခက္မတို့အားလုံးကို မ၀၀တ်သောလူတွေ ကိုးကွယ်မှုကနေ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ရဟန်း ၅၀၀ အား အဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် ပင့်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင် လုပ်စွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မိရိုးဖလာ ဘာသာဝင်နှင့် တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စာအုပ်၊ မျက်ရည်မကျခင် သိစေချင်စာအုပ်၊
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← သရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းနှင့် ကောင်းကျိုးများ